Cellulose Ether Warshada |Bixinta HPMC/MHEC/HEC/CMC
Heerka Dhismaha HPMC
Saabuunta darajada HPMC
Heerka Pharma HPMC
Heerka Cuntada HPMC
Budada Polymer-ka dib loo cusboonaysiin karo (RDP)
Xannaanada Laysku dhejiyo
Wajigii Dhismuhu wuu dhamaaday
Nidaamka Dhamaystirka Dahaarka Dibadda (EIFS)
Xabagta ku salaysan gypsum
Malaastaan ​​gypsum ah
Buuxiyeyaasha wadajirka ah
Malaastarrada Mashiinka Codsaday
Isku qas la taaban karo oo diyaar ah
Hoobiyeyaasha dahaarka kulaylka
Hoobiyeyaasha aan biyuhu lahayn
Saabuunta dareeraha ah
Kima Chemical Co., Ltd. waa soo saaraha ethers cellulose muhiimka ah ee Shiinaha, oo ku takhasusay wax soo saarka ether cellulose, ku salaysan ee Shandong Shiinaha, tirada guud ee 20000 tan sanadkii.
Alaabooyinkayaga oo ay ku jiraan Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC), Hydroxyethyl Methyl Cellulose (MHEC), Hydroxyethyl Cellulose (HEC), Sodium Carboxy Methyl Cellulose (CMC), Ethyl Cellulose (EC), Budada Polymer Redispersible (RDP) iwm, taas oo si weyn loo isticmaali karaa. in dhismaha, xabagta dhoobada, hoobiye isku qasan qalalan, darbiga galiyay, Skimcoat, rinjiga cinjirka, farmashiyaha, cuntada, qurxinta, saabuunta iwm codsiyada.
Soo saaraha ether-ka cellulose ee xirfadleyda ah ee Shiinaha.
Waxaan ku siin kartaa dhammaan taxane ah ethers cellulose, warshadaha, cuntada iyo fasalka farmashiyaha, buuxinaya shuruudaha macaamiisha ee codsiyada kala duwan.
Waxaan khibrad u leenahay oo ka shaqeeya beerta cellulose ether sanado badan, waxay siin karaan adeeg iibka ka dib macaamiisha, waxay ka jawaabi karaan su'aalaha macaamiisha gudaha 24hours.
Waxaan codsaneynaa nidaamka xakamaynta DCS ee horumarsan, kaas oo dammaanad qaadaya tayada xasilloon ee dufcadaha kala duwan. Iyada oo awood ku filan, waxaan dammaanad qaadi karnaa sahayda xasilloon ee macaamiisha.
Diirada saar Ethers Cellulose
Waa maxay hababka ether cellulose sida wax lagu daro hoobiyaal qalalan?
Mid ka mid ah farqiga ugu weyn ee u dhexeeya hoobiyaha qalalan iyo hoobiye dhaqameed ayaa ah in hoobiye engegan lagu beddelo qadar yar oo kiimiko ah.Ku darista hal nooc oo lagu daro hoobiye engegan ayaa loo yaqaan 'primary modification', ku darida laba ama in ka badan oo lagu daro waa wax ka beddel labaad.Tayada d...
Hordhaca Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC)
【Hordhac】 Magaca Kiimikada:Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) Formula Molecular:[C6H7O2 (OH) 3-mn (OCH3) m -CH2CHOHCH3;X= darajo polymerization.Soo gaabinta: HPMC 【Sifada】 1. Biyo-milmi kara, cellulose aan-ionic ahayn c...
Doorkee ayay ether-ka cellulose ka ciyaarta hoobiyeyaasha isku qasan ee qalalan?
Eter cellulose waa polymer synthetic ka samaysan cellulose dabiiciga ah sida walxo ceeriin ah oo wax ka beddelka kiimikada.Eter cellulose waa nooc ka mid ah cellulose dabiiciga ah, wax soo saarka ether cellulose iyo polymer synthetic waa ka duwan yahay, alaabta ugu aasaasiga ah waa cellulose, xeryahooda polymer dabiiciga ah.Sababtoo ah t...
Cinwaanka: Huaguang Road No. 188, Zhangdian, Zibo, Shandong, 255000, Shiinaha